बिग बोस ओटीटी : ट्रफी जितेपछि उत्सव मनाउदै दिव्या अग्रवा, कति पाइन् प्राइज मनी ? « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं । रियलिटी शो क्वीन दिव्या अग्रवाल ‘बिग बोस ओटीटी’को विजेता बनेकी छन् । शनिबार सम्पन्न भएको ग्राण्ड फिनालेमा सबैलाई पछि पार्दै दिव्या अग्रवाल ‘बिग बोस ओटीटी’को विजेता बनेकी हुन् ।
‘बिग बोस ओटीटी’को उपाधि जितेपछि दिव्याले आफ्नो ब्वाईफ्रेण्ड बरुण सूद, नजिकका साथी र परिवारसँग आफ्नो जितलाई सेलिब्रेट गरिरहेकी छन् । व्बाईफ्रेण्ड बरुण सूद र रोडिज फेम अभिनेता रणविजय सिंहले आ–आफ्नो इन्स्टाग्राम स्टोरीमा दिव्या अग्रवालको जितको सेलिब्रेशन भिडियो सेयर गरेका छन् । उक्त भिडियोमा ‘बिग बोस ओटीटी विजेता दिव्या अग्रवालले केक काटेर आफ्नो जितको उत्सव मनाइरहेकी छन् ।
बरुणले भिडियो सेयर गर्दै आफ्नो लेडी लभका लेखेका छन्, ‘मलाई तिमीमाथि गर्व छ ।’ त्यस्तै भिडियोमा रणविजय सिंह पनि दिव्याको तारिफ गरिरहेका अन्दाजमा देखिएका छन् । उक्त भिडियोमा उनका अन्य साथीहरुमा देखिएका छन् ।
दिव्याले कति पाइन् प्राइज मनी ?
दिव्या अग्रवालले बिग बोस ओटीटीको चम्किलो ट्रफीसहित २५ लाख भारुको प्राइज मनी प्राप्त गरेकी छन् । आफ्नो जितलाई लिएर दिव्य निकै खुसी छन् । शोमा दिव्याको जर्नी निकै कठिनपूर्ण रहेको थियो । उनले कनेक्शन बिनानै आफ्नो गेम खेलेकी थिइन् ।
शोमा उनले कसैलाई साथी पनि बनाएकी थइनन् । तर पनि सबै चुनौतीहरुको सामना गर्दै दिव्याले बिग बोस ओटीटीको ट्रफी आफ्नो नाममा पार्न सफल भएकी छन् । उक्त शोको टप ५ मा राकेश बापट, शमिता शेट्टी, दिव्या अग्रवाल, प्रतीक सहजपाल र निशान्त भट्ट पुगेका थिए ।